समृद्धिको सपनामा भौतिक पूर्वाधार
शङ्का गर्नेहरू छरफस्ट भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको महाउत्सवले मुलुकलाई छपक्कै ढाकेको छ । वैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको निर्वाचन मुखमै आएपछि ढाकिने नै भयो । यो निर्वाचनको प्रचारप्रसारको समय लागि अब चार दिनमात्र बाँकी छ । बिहीवार साँझदेखि नै मौन समय आरम्भ हुन्छ । निर्वाचन सार्ने वा टार्ने कुरा गर्ने अहिले पनि खानदानी बैठकमा गिलास रित्याउँदै छन् तर सामान्य नागरिकका लागि सार्ने वा टार्ने कुरा अब कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइसकेको छ । यो निर्वाचनमा नेताभन्दा नागरिक धेरै कदम अगाडि पुगेका छन् । हुन पनि निर्वाचनप्रति सामान्य नागरिकका उत्साह र प्रतिबद्धता सायदै यसअघिका निर्वाचनमा कहिल्यै देखिएको थियो । नागरिक र मतदाताको मन जित्न पार्टीहरूले घोषणापत्र बाहिर ल्याइसकेका छन् । राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याएका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जे भनिए पनि, ती दस्तावेजहरू अनौठा छन् । भइरहेको छ स्थानीय निर्वाचन तर कुरा र प्रतिबद्धता भने राष्ट्रिय चुनावका छन् । दीर्घकालीन छन् । तलका कुरा न्यून छन् ।
समय सन्दर्भले एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने भयो । पहिलो चरणको वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन तीनवटा प्रदेशमा हुँदैछ । बाँकी चार प्रदेशका लागि दोस्रो चरण जेठ ३१ गतेको निर्वाचनका लागि केही विवाद र संशय अझै छन् । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि केही असजिलो पारेको छ । प्रमुख प्रतिक्षप दल नेकपा एमालेका सिंहदरबारसँग विशिष्ट माग छन् । संविधान संशोधनका मुद्दा त छँदैथियो, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा पुगेको महाभियोग प्रस्तावले आकस्मिक मोड लियो, लिदँैछ । महाभियोगसँगै स्वाभाविक निलम्बनको मामिलाको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राजनीतिक माहोल तताए पनि निर्वाचनप्रतिको नागरिक एकलब्यता झनै बढेर गएको छ । वास्तवमा पार्टीका घोषणापत्रभन्दा आफ्नो स्थानीय सरकार आफैँ चुन्ने नागरिक प्रतिबद्धता उर्लेर आएको छ । तालमेलले रौनक हेर्नलायक बनाउँदै छ ।
राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहे पनि घोषणापत्रमा भने ठुल्ठूला राष्ट्रिय कुरा र वाचा गर्नमै धेरै बढी ऊर्जा खर्च गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हरेक स्थानीय तहका लागि अलग–अलग नीति र कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । नेपाली काँग्रेसले आगामी १० वर्षमा देशलाई मध्यमस्तरको आय भएको गतिशील राष्ट्र मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हरेक वर्ष कम्तीमा तीन लाख र बढीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ । पूर्वपश्चिम रेलदेखि ऊर्जा र उद्योगसम्मका कुरा राष्ट्रिय निर्वाचन सरहनै समेट्नु अचम्म भएको छ ।
ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले त १० वर्षको कुरा मात्र गरेको छ । अन्य पार्टीले अझ ठूला कुरा गरेका छन् । लामो समयको प्रतिबद्धा लिइएको छ । नेकपा एमालले २५ वर्षको लक्ष्य राखेको छ । उसले आगामी २५ वर्षमा देशलाई समृद्ध राष्ट्रका हाराहारीमा पु¥याउने भनेको छ । समृद्ध राष्ट्रभन्दा अहिले विश्वमा मानिएका विकसित राष्ट्र भन्ने नै बुझिएला । बुझ्नु पनि पर्छ । विकसित राष्ट्र हुनका लागि कम्तीमा पनि वार्षिक प्रतिव्यक्ति १४ हजार डलरभन्दा माथि आय पुग्नुपर्छ । अहिले मुलुक अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले वार्षिक औसत ७३० डलर मात्र छ । अझै २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । त्यो जनसङ्ख्या अहिले पनि दैनिक एक डलरभन्दा कम आय गर्छ । यो दलहरू चर्का कुरा गर्दा ध्यान नदिएको पक्ष हो ।
दैनिक एक डलर आय गर्न नसक्ने मानिस र परिवारको अवस्था अहिले पनि नाजुक छ । नेपालमा झण्डै पाँच जनामा एक जना अर्थात् पाँच परिवारमा एकले बिहान खाए बेलुक भोकै र बेलुका खाए बिहान भोकैको अवस्थामा छन् । ती परिवारलाई भोकको ज्वाला शान्त पार्नेतिर सरकारले आजसम्म कहिल्यै केही गरेको छैन । निर्वाचनका घोषणपत्रका नाममा राजनीतिक पार्टीहरू त्यस्ता संवेदनशील कुरामा अहिले पनि मौन नै छन् । बरू राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान निःशुल्क वाइफाइतिर गएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सिंहदरबार गाउँ नगरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता लिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले अझ दमदार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि के कम ? उसले दश वर्षमा सबै नगरलाई स्मार्ट बनाउने सपना बाँडेको छ ।
भारतको पूर्व राष्ट्र स्वर्गीय अब्दुल कलामको एउटा भनाइ धेरैले प्रयोग गर्छन् । निदाएर देख्ने वास्तवमा सपना होइन, सपना त त्यो हो, जसले निदाउन दिँदैन । जागरण अवस्थाको सपना वास्तविक सपना हो । कल्पनाको सागरमा डुबेर गरिने प्रतिबद्धता वा घोषणपत्रको धेरै ठूलो अर्थ छैन । स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय सपना र प्रतिबद्धताको वास्तवमै ठूलो अर्थ छैन र हुँदैन पनि । यो स्थानीय निर्वाचनपछि पनि दुईवटा निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यनता छ । एउटा केन्द्रीय निर्वाचन र अर्को प्रदेशको निर्वाचन । अहिलेको घोषणपत्र हेर्दा लाग्छ, ती स्थानीय तहका निर्वाचनको घोषणपत्र होइनन्, केन्द्रीय निर्वाचनका घोषणपत्र हुनु तर मुलुकी वास्तविकता भने असाध्य फरक छ ।
दुई वर्षअघि आएको संविधानले अब केन्द्रमा एउटै दलको सरकार बन्ने सम्भावना विरालाकोटीमात्र छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्र एउटै पार्टीको सरकारको सम्भावना हुन्छ । समानुपातिकसमेतको व्यवस्थाले मुलुकमा मिलिजुली सरकारको विकल्प नै छैन । केन्द्र सरकार एकै दलको नभएपछि मिलेर सरकार बनाउनै प¥यो । मिलिजुली संस्कार असाध्य कमजोर रहेको नेपाली सन्दर्भमा राष्ट्रिय वाचा र प्रतिबद्धताका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि त्यो सम्भव हुने छैन । त्यसैले कुरा ठुल्ठूलाभन्दा पनि साना र अपरिहार्य कार्यमा घोषणपत्र केन्द्रित भइदिएका भए त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने थियो ।
मूलत ः स्थानीय निकायको संरचना असाध्यै कमजोर छ । खासगरी भौतिक संरचना र मानवीय संशाधन पनि । अघिकांश नगरका र सबैजसो गाउँपालिकाका राम्रो भवन छैन । हुन त भौतिक संरचना विकासका निम्ति कहिल्यै दूरदृष्टि अवलम्बन गरिएन । राणाकालमा मुलुकमा तराई र पहाडमा गरी ३२ गौडागोश्वरा थिए । तिनले प्रशासनिक कामकारबाही चलाउन सकिन्थ्यो । तिनलाई बलियो बनाउन सकिन्थ्यो तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालको जनविरोधी कदमपछि लोकप्रिय कदम चाल्ने भए । अर्को वर्ष २०१८ सालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाइयो । चार विकास क्षेत्र थिए । पछि सुदूरपश्चिमलाई अलग गरेर पाँच विकास क्षेत्र बनाइयो । लोकको प्रिय बन्न यो संरचना बनाइए पनि कहिल्यै भौतिक संरचनामा ध्यान दिइएन । कुनै पनि जिल्लामा दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको सुविधालाई हेर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार अब्बल रूपमा बनेन । अधिकांश प्रशासनिक भवन भाडामा चलाइयो । बनाइएका भौतिक पूर्वाधार पनि नाजुुक बनाइयो र दूरदृष्टिको सानो अंश पनि हेरिएन ।
सङ्घीयता र स्थानीय सरकारको सपना स्वरूप देशभर ७४४ स्थानीय निकाय बनेका छन् र संविशान संशोधनका नाममा तिनलाई बढाउने खेलोतिर छ मुलुक । वास्तवमा ७४४ स्थानीय तह होइनन्, ती त ७४४ जिल्ला हुन् । अझ जिल्लाभन्दा पनि अब्बल भौतिक पूर्वाधारका माग गर्ने संरचनाको जरुरी हो । नयाँ परिवेशले बल्लतल्ल बनेका जिल्लालाई अलपत्र पारेको छ र अब्बल स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ । तिनको भौतिक पूर्वाधारमा खासै ध्यान दिइको छैन । त्यसका लागि सिंहदरबारको नीति, योजना र कार्यक्रम सतही छन् । स्रोतको अभाव छँदैछ । राजनीतिक पार्टीका घोषणपत्र जरुरी रहेको त्यस पाटोमा प्रभावकारी सपना देखेका छैनन् । सात प्रदेश भन्नु सातवटा सरकार चल्नु हो । केन्द्रमा एउटा सरकार चल्ने साधन र स्रोतको भलीभाँती जानकार हुनेका लागि स्थानीय सरकारहरूको भौतिक संरचनाको खाकाको जग नभई कसरी घर बनाउने हो ? कम्तीमा स्थानीय निकायमा चुनाव लड्ने उम्मेदवार र दलहरूसँग नागरिकले गर्ने माग पक्ष यही हो । यो पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारको वर्षका रूपमा पहिल्यै निर्वाचनले बाटो देखाए कसो होला ?